onlineakhabar.com: के तपाईलाई ऋण चाहियो ? त्यसो भए यो बैंकमा मिसकल गर्नुस्
Main News, National, Nepali Bank, News » के तपाईलाई ऋण चाहियो ? त्यसो भए यो बैंकमा मिसकल गर्नुस्
के तपाईलाई ऋण चाहियो ? त्यसो भए यो बैंकमा मिसकल गर्नुस्
के तपाईलाई पैसाको खाँचो पर्यो ? बैंकबाट ऋण लिने विचारमा हुनुहुन्छ ? अनि बैंकहरुको झन्झटिलो प्रक्रियाबाट वाक्क दिक्क हुनुहुन्छ ? उसो भए तपाईका लागि खुसीको खबर छ । अब पैसाको खाँचो परे बैंकलाई मिसकल गरे पुग्छ । यसको मतलब मिसकल गर्ने बितिक्कै घरैमा पैसा ल्याई दिन्छ भन्न खोजेको होइन । तर बैंकले तपाईको मिसकल आउने बितिक्कै फोन गर्छ । र पैसा निकाल्न आवश्यक जानकारी र सहयोग प्रदान गर्छ । यो कुनै बिकसित देशको कुरा होइन नेपालकै एक बाणिज्य बैंकले यस्तो सुबिधा भित्र्याएको छ । ग्राहकसंग पनि साथी जस्तै सम्बन्धको अनुभूति दिलाउदै ऋण लिनका लागि मिस कल गर्ने सुबिधा ल्याएको हो ।
बढ्दो तरलता, भूकम्प र नाकाबन्दीले खुम्चिएको लगानीको अवसरले गर्दा हाल बाणिज्य बैंकहरुले ७/८ प्रतिशतमा घर जग्गा ऋण उपलब्ध गराउदै आएका छन । यहि अवस्थामा एनएमबी बैंकले गत दुई महिना देखि अत्यन्त सस्तो बार्षिक ६.६६ प्रतिशतमा घर कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको छ। घर कर्जा अझै प्रभाबकारी बनाउनका लागि बैंकले मिस कल सुबिधा उपलब्ध गराएको छ। ऋण लिन इच्छुक ग्राहकले बैंकले उपलब्ध गराएको एनसेल नम्बर ९८०१७१७६६६ मा मिस कल गरेपछि बैंक आफैले ग्राहकलाई कल फर्काउछ ।
मिस कल दिने ग्राहकलाई बैंकले बिहान ९:३० बजे देखि ५:३० बजेसम्म कल फर्काउने गर्दछ। बैंकको नक्सालमा रहेको कलसेन्टरमा ऋण लिनका लागि दैनिक ८ सय सम्म कल आउने रिटेल बैकिङका म्यानेजर शुसेनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन। ‘मिस कल दिने व्यक्तिलाई कहाँ कुन शाखामा गएर कोसंग कुरा गर्ने भन्ने बारे जानकारी दिन्छौ’ श्रेष्ठले बताए। ‘मिस कल दिने सबैलाई फोन फर्काउछौ यसमा कोहि छुट्दैनन, ग्राहकलाई फोनबाट नै पायक पर्ने शाखाको लोकेसन पनि दिन्छौ’ उनले बताए। एनएमबी बैंकले सस्तो दरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउदै आएको करिब दुई महिना हुन लागेको छ। ग्राहकको सुविधाको लागि बैंकले उपलब्ध गराएको मिस कल व्यवस्थाले घर कर्जा ऋण प्रभाबकारी भएको बैंकले जनाएको छ। राजधानी बाहिर बिशेष गरि पुर्व तथा पश्चिमबाट बढी मिस कल आउने श्रेष्ठले बताए ।
श्रोत : बिजपाटि
Tags : Main News National Nepali Bank News